Owu Nwowɔe: Sɛ Nnipa Wu a na Asa?
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bengali Bicol Bislama Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Dangme Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Finnish French Ga Georgian German Greek Greenlandic Guarani Gujarati Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kannada Kazakh Kikaonde Kikuyu Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kongo Korean Krio Latvian Lingala Lithuanian Luganda Luo Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Marathi Maya Moore Myanmar Nepali Ngabere Norwegian Nyaneka Nzema Oromo Otetela Pangasinan Papiamento (Aruba) Persian Polish Portuguese Punjabi Quechua (Bolivia) Rarotongan Romanian Russian Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swedish Tagalog Tahitian Tamil Tatar Telugu Thai Tigrinya Tshiluba Tsonga Tswana Turkish Twi Ukrainian Umbundu Urdu Venda Vietnamese Wayuunaiki Xhosa Yoruba Zande Zulu
Owu de, obiara mpɛ sɛ ɔbɛte ho asɛm, na ebinom mpɛ sɛ epue wɔn ano mpo. Nanso, ɛda amansan kɔn mu; ɛyɛ yaw, na etwa te sɛ sekan.
Owu wɔ hɔ yi, ɛnkokwaw, ɛnkanka ne sɛ afa wo maame, wo papa, wo yere, wo kunu anaa wo ba. Ɛmmɔ nkae, na etumi tu n’ani si abusua so. Owu biara nso nni hɔ a ɛnyɛ yaw, na owu sɛe fie.
Kar bɔɔ Antonio papa kum no, na Antonio kaa owu no ho asɛm sɛ: “Ɛte sɛ obi agye wo fie safoa afi wo nsam abrambram wo pon akyi kɔ. Worentumi nkɔ fie hɔ koraa; ɛba saa a, na ato adwennwene. Nanso woyɛ dɛn ara a, nea aba ne no. Ɛyɛ wo sɛ ɛnyɛ nokware, efisɛ wudwen ho ara a, wonte ase, nanso woyɛ ho hwee a, ɛnyɛ yiye.”
Dorothy nso kunu wui; saa bere no na Dorothy adi mfe 47, na ɔyɛe sɛ nsɛm bi a ɛkyere n’adwene no, ɔbɛhwehwɛ ho mmuae. Ná ɔyɛ “Sunday-school” tikya, enti na onim sɛ anidaso wɔ hɔ ma awufo. Nanso na onni ho nkyerɛkyerɛmu biara. Na ɔkɔ Anglikan asɔre, enti obisaa ne sɔfo sɛ, “Enti yewu a, ɛhe na yɛkɔ?” Ɔno nso buae sɛ, “Obiara nnim; daakye na yebehu.”
Ɛyɛ ampa sɛ “daakye na yebehu”? Biribi wɔ hɔ a ɛbɛboa yɛn ama yɛahu sɛ nnipa wu a, anidaso wɔ hɔ anaa?
Adesamma asetena nyinaa mu no, nnipa ahwehwɛ a kwan wobetumi afa so adi owu so nkonim. Enti yebetumi adi owu so nkonim?
Text Baabi a wubetumi atwe nneɛma akenkan ƆWƐN-ABAN January 2014 | Sɛ Nnipa Wu a na Asa?
Audio Baabi a wubetumi atwe nneɛma abɔ atie ƆWƐN-ABAN January 2014 | Sɛ Nnipa Wu a na Asa?